Juventus & Udinese oo isku haysta horyaalka Talyaaniga ee Serei A-ga +Warar kale – SBC
Juventus & Udinese oo isku haysta horyaalka Talyaaniga ee Serei A-ga +Warar kale
Kooxda AC Milan ee haysata horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A oo xili ciyaareedkan jahwareer iyo daandaan uu haysto ayaa xaley wacdaro adag wuxuu ka qabsadey kulan xamaasad huwan oo ka dhacay garoonka Juventus.
Ciyaartan oo aheyd mid adag oo la is mari waayey in ka yar 10 daqiiqo markii ay ka harsantahay waxaa daafaca kooxda AC Milan ee uu leeyahay Ra’isalwasaaraha Talyaaniga jabsadey weeraryahanka Claudio Marchisio oo daqiiqadihii 87-aad iyo 90-aad laba goo loo caaqibo leh dhex dhigay shabaqa AC Milan.
AC Milan sidoo kale waxaa kaarka cas loo taagey xidiga reer Ghana Kevin-Prince Boateng iyadoo guuldarada AC Milan xaley ku dhacdey ay ku dajisay kaalinta 15-aad ee kala horeynta kooxaha.
Kulamadii shaley ee kooxda As Roma waxay ku durdurisay 3-1 kooxda Atalanata iyadoo goolasha ay u kala saxiixeen Roma ciyaaryahanka sanadkan ka soo galey dhanka Barcelona Bojan Krkic, oo daqiiqadii 20-aad gool dhaliyey iyadoo uu labayeen Osvaldo halka daqiiqadii 81-aad uu sadexeeyey Simplicio.
Sanadkan waxay ka jiiftaa labada kooxeed ee ka yimid Magaalada Milano ee AC Milan & Intern Milan waxaana kooxda Napoli guriga Inter ee Stadio Giuseppe Meazza ee lagu naaneyso San Siro ee ku yaal degmada San Siro ee magaalada Milan laguna magacdarey ciyaaryahankii Giuseppe Meazza ee Talyaaniga sanadihii 1934-tii iyo 1938-dii u horseeday ku guuleysashada koobka aduunka ee u ciyaari jirey kooxda Inter Milan mar dambana ku biirey AC Milan.
Napoli waxay ku garaacdey Inter 3 gool oo ay u kala saxiixeen ciyaaryahan Hugo Campagnaro daqiiqadii 43-aad, Christian Maggio daqiiqadii 56-aad iyo Marek Hamsik daqiiqadii 57-aad.
Inter waxaa ka qaatey kaarka casaanka ciyaaryahanka khadka dhexe Joel Obi taasi oo keentey in ay awood u yeelan waayeen inay iska caabiyaan weerarada Napoli
Tababaraha cusub ee kooxda Inter Claudio Ranieri oo kulamo muhiim ah soo badiyey waxaa habeen hore ka soo hartey in uu aflagaado toos ah u geysto garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadinyey Gianlucca Rocchi ninkaasi oo taageerayaasha Inter ku riixaan in uu markasta u garbiyo kooxda AC Milan.
Novara3 – 3Catania
Fiorentina1 – 2Lazio
Lecce0 – 2Cagliari
Udinese2 – 0Bologna
Cesena0 – 0Chievo
Palermo2 – 0Siena
Parma3 – 1Genoa